ဥမ္မာလွင် – Page 8 – The Voice Journal
သစ်တောပြုန်းတီးမှု များပြားနေသော မြန်မာနိုင်ငံတွင် တနင်္သာရီဒေသရှိ သစ်တောများကို နောက်ဆုံးခံတပ်အနေနှင့် မှတ်ယူကြသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွင် သစ်တောဖုံးလွှမ်းမှု ဧရိယာအများဆုံးကျန်ရှိနေသည့် သစ်တောကောင်း (Closed Forest) များ ကျန်ရှိနေသေး၍ဖြစ်သည်။ ကောင်းမွန်နေသည့်သစ်တောများကို ထိန်းသိမ်းရန် ကောင်းမွန်သည့်...
ပြီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းအတွင်း ပွဲဆူသွားသော ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုမှာ ရန်ကုန်မြို့လယ် အောင်ဆန်းကွင်းပတ်ပတ်လည်ရှိ ဆိုင်ခန်းငှားခ ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် အစိုးရက ရှင်းလင်းသွားချက်အရ ယင်းဆိုင်ခန်းငှားခ တစ်လကျပ်တစ်သောင်းကျော်ကျော်သာ ကျသင့်သည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အားကစားကွင်းပတ်ပတ်လည်ရှိ ဆိုင်ခန်းပေါင်း ၃၂၁ ခန်းအတွက် တစ်နှစ်စာငှားရမ်းခ ငွေကျပ်သိန်း ၄၈၀...
အသက် ၉၀ ကျော် သမိုင်းဝင်ဈေးကြီး
နာရီ၊ မိနစ်လက်တံများရပ်နေသည့် နာရီစင်ရှိရာ၊ အင်္ဂလန်ကကျောက်များဖြင့် ခင်းကျင်းထားသည်ဟု အဆိုရှိသည့် နေရာ။ ကိုလိုနီခေတ်လက်ရာ အဆောက်အအုံလည်းဖြစ်၊ သမိုင်းတန်ဖိုးလည်းဝင်သော ထုထည်ကြီးမားသည့် ဈေးကြီး။ သူ့သက်တမ်းက ၉၂ နှစ် ရှိချေပြီ။ ထိုဈေးကား စကော့ဈေး(ခေါ်) ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဈေး ဖြစ်သည်။...
Features Stories / Lifestyle / Stories
ကိုယ်ခံပညာတစ်ခုတတ်မြောက်ရန် အရေးတကြီးလိုအပ်လာနေပြီလော။ လက်ရှိကြားသိနေရသော ခေတ်အခြေအနေအရ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး မရွေး ကိုယ်ခံပညာတတ်ထားရန် လိုအပ်နေချိန်လည်း ဖြစ်သည်။ လိုအပ်သည်ဆိုလျှင် မည်သည့်ကိုယ်ခံပညာကို ရွေးချယ်သင်ယူကြမည်နည်း။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးတွင် ကိုယ်ခံပညာနည်းစနစ် အမျိုးမျိုးရှိနေသည်။ ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် တိုက်ကွမ်ဒို၊ ဂျပန်တွင် ကရာတေးဒို၊...
ကံ့ကော်ရိပ်ဆီက ဘုရင်နှင့် ဘုရင်မများ
မြူခိုးဝေချိန်၊ အေးမြသည့်အချိန်အခါကို ချဉ်းနင်းဝင်ရောက်လာချိန်သည် တက္ကသိုလ်ကျောင်းများပြန်ဖွင့်သည့် ရာသီချိန်ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်တွင် တက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်နှင့် စတင်မိတ်ဆက်ကြမည့်သူများမှာ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်ပြီးစ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် လူငယ်များပင်။ သူတို့သည် ဘုရင်နှင့် ဘုရင်မလောင်းလျာများလည်း ဖြစ်နိုင်လေသည်။ ကျောင်းတော်ကြီးရင်ငွေ့ကိုဦးစွာ ခံယူထားသည့် စီနီယာများက Fresher Welcome...
Cover Story / Stories
ဟိုင်းကြီးကျွန်းသူ မဇင်မီမီဝင်း တစ်ယောက် နာဂစ်မုန်တိုင်းဘေးမှ အသက်ရှင်လွတ်မြောက်ခဲ့သော်လည်း ရန်ကုန်ရောက်သောအခါ စိုးရိမ်စရာအသစ်ကို ထပ်မံရင်ဆိုင်နေရပြန်သည်။ ထိုအရာကား ငလျင်ဘေး။ ဇန်နဝါရီလအတွင်း ခပ်စိပ်စိပ်လှုပ်ခတ်ခဲ့သော ငလျင်များက မဇင်မီမီဝင်းအပါအဝင် ရန်ကုန်တွင် အခြေချ နေထိုင်သူများအတွက် ခေါင်းလောင်းသံ ဖြစ်လာစေခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်...
လျှပ်စစ်ပိုနေသည်ဟု တစ်ချိန်က ဖွင့်ပြောခဲ့ဖူးသောနိုင်ငံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ နှစ်စဉ် သဘာဝဓာတ်ငွေ့များစွာ ရောင်းချနေသောနိုင်ငံ၊ ယခုတော့လာအိုနိုင်ငံမှ လျှပ်စစ်ပြန်ဝယ်ရတော့မည်လော။ ဇန်နဝါရီလလယ်ကကျင်းပခဲ့သော မြန်မာ-လာအို နှစ်နိုင်ငံ ထပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် မြန်မာက လာအိုမှ လျှပ်စစ်ဝယ်ရန် နှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ ရေးထိုးခဲ့သည်။ နှစ်နိုင်ငံထိပ်သီးဆွေးနွေးမှုများအရ...
Environment / Stories
ပြီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းအတွင်း ပြည်သူများအကြားတွင် စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့ည သန်းခေါင်ယံအချိန်တွင် မြေငလျင်များ ဆက်တိုက်လှုပ်ခတ်ခဲ့သည့် ကိစ္စဖြစ်သည်။ ထိုငလျင်လှုပ်ခတ်မှုကြောင့် အိပ်ရာမှလန့်နိုးသူ၊ တိုက်ပေါ်က ပြေးဆင်းသူများအပြင် စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုဖြင့် ထိုင်နေသူများစွာရှိခဲ့သည်။ “အိပ်နေရင်း ငလျင်လှုပ်လို့...
မိုင်ပေါင်းနှစ်သောင်းကျော်ကို ဖြတ်သန်းကာ ငှက်ကလေးခရီးနှင်နေသည်။ သူ၏နေရပ်ဒေသမှ ထွက်ခွာကာ သူစိမ်းနယ်မြေထဲတွင် ခေတ္တနေထိုင်ရန် လေဟုန်ထဲ ဝဲပျံလာသည်။ လေစုန်လေဆန်ကို ချီတက်ကာပျံသန်းလာခြင်းဖြစ်သည်။ အာဆီယံလေစီးကြောင်းထဲကို ဆန်တက်ရင်း အဝါရောင်ငှက်ကလေးအုပ်စု မိုင်သောင်းချီခရီးစဉ်ကို အားစိုက်ချီတက်လာကြသည်။ အဝေးကြီးကလာသော ထိုခရီးသည်မှာ ဦးခေါင်းအညိုရောင်၊ လည်ရစ်...
ယခုနှစ် လွတ်လပ်ရေးအခမ်းအနားမှာ ညပိုင်းအစီအစဉ်များပင် ဆက်လိုက်သေးသည်။ ယခင်နှစ်များတွင် နံနက်ပိုင်း အစီအစဉ်များနှင့်ပင် လွတ်လပ်ရေးအခမ်းအနားပြီးဆုံးသည်။ သို့သော် လွတ်လပ် ရေးနေ့ နှစ် (၇၀)ပြည့်မြောက်သည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ယင်းသို့မဟုတ်။ ညနေပိုင်း၌ မြို့တော်ခန်းမရှေ့တွင် နိုင်ငံကျော် အဆိုတော်များ၏...